Iza moa izahay - Qingdao Evergrowing Cage Co., Ltd
Evergrowing dia mitarika ny mitsingevana mpamatsy trondro cages ho an'ny fambolena trondro ao afovoan-tany sy ny rano-dranomasina. Isika nanokan-tena hanao ny mari sy hanome kalitao avo trondro cages catered ny zavatra ilaina sy ny toe-javatra eo an-toerana.
Fanjonoana mihoa-pampana dia niafara tamin'ny bibidia manan-danja mihavitsy ny trondro. Fish tranom-borona fambolena toy ny tontolo iainana misy vahaolana maharitra ho ity olana ity. Evergrowing no miasa eo amin'ny fampandrosoana, fanamboarana sy varotra samy hafa karazana trondro nitsinkafona cages. Ny cages manome isika dia mifanaraka amin'ny fepetra manokana. Isan-karazany ahitana ny vondrona kely mety tsara ho an'ny asa fikarohana na Fry famokarana tsara ho amin'ny boribory goavam-be trondro HDPE cages afaka miasa ao dranomasina fepetra.
Efa nahatratra ny orinasa ary mitohy amin'ny fitomboana eo amin'ny trondro tapaka cages manome.
Expand anatrehan'ny tany an-tsena sy ny hamaha tsirim tsena hafa eran-tany.
Nandritra ny taona maro ny fampandrosoana, no nanorenanay miara-miasa akaiky ny fifandraisana amin'ny China Ocean University, Jono Institute sy ny mpahay siansa eran-tany za-draharaha aquaculture. Izahay mpamatsy ny vahaolana sy ny tolotra mba hanatsarana ny profitability.
Evergrowing no filamatra mpiara-miasa amin'ny tranom-borona-dalam-pandrosoana trondro tetikasa fambolena.
Fatra-paniry laza, ary maharitra, malefaka sy holistic
Mba hanome ny tsara indrindra mba hamonjy vola lany fitaovana sy hanatsarana ny vokatra
Foster ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana tompon'andraikitra raharaham-barotra